Vaovao - Tamin'ny taon-dasa, 11,0 GWH an'ny bateria lithium manerantany ho an'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra no nalefa, 80% amin'ireo no lanin'ny orinasa sinoa
Kitapo bateria / bateria Li-ion
Tamin'ny taon-dasa, 11,0 GWH an'ny bateria lithium manerantany ho an'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra no nalefa, ny 80% amin'izy ireo dia lanin'ny orinasa sinoa
Ny bateria lithium dia niaina ny fanoloana ny batterie nickmi cadmium ary avy eo ny batterie hidrogen hidrogen. Raha ny fahitana ny maridrefy amin'ny tsena, ny haben'ny tsenan'ny bateria lithium ho an'ny fitaovan'ny herinaratra dia hahatratra 9,310 miliara yuan amin'ny taona 2019, ary ny haben'ny tsenan'ny bateria lithium ho an'ny fitaovana mandeha any Shina dia hahatratra 7.488 miliara yuan.
Vao tsy ela akory izay, evtank, andrim-pikarohana iray, no niara-namoaka ny taratasy fotsy momba ny fampandrosoana ny indostrian'ny fitaovana enti-miasa ao Shina (2020) miaraka amin'ny Ivey Economic Research Institute. Ao amin'ny taratasy fotsy, evtank dia nanao fikarohana antsipiriany momba ny habetsahan'ny fandefasana, ny refin'ny tsena, ny firafitry ny orinasam-pitaovana herinaratra, ny toe-javatra fanondranana ireo orinasam-pitaovana herinaratra, ary ny toetoetran'ny bateria ho an'ny fitaovana elektrika, ary nanao fandalinana feno sy fanadihadiana momba ny vokatra eto an-toerana lehibe Fanatanterahana ny fandinihana ny benchmarking an'ny orinasam-pitaovana herinaratra.
Araka ny taratasy fotsy navoakan'ny Ivey Economic Research Institute, miaraka amin'ny fampivoarana ireo fitaovana mandeha tsy misy tariby, mitombo ihany koa ny isan'ny sela ilaina amin'ny fitaovana elektrika tokana, ary ny fandefasana batterie lithium ho an'ny fitaovana elektrika dia nitombo haingana. Amin'ny taona 2019, ny fitaovana fandefasana bateria lithium manerantany dia hahatratra 11.0gwh, miaraka amin'ny fitomboana 25.0% isan-taona, ary ny filan'ny bateria lithium amin'ny tsenan'ny fitaovana enti-miasa ao Shina dia 8,8gwh, miaraka amin'ny taona isan-taona fitomboan'ny 25,7%.
Araka ny taratasy fotsy, ny bateria lithium dia niaina ny fanoloana batterie nickmi cadmium ary avy eo lasa batterie hidrogen hidrogen. Raha ny maridrefy amin'ny tsena, ny maridrean'ny bateria lithium manerantany ho an'ny fitaovana elektrika dia hahatratra 9.310 miliara yuan amin'ny taona 2019, ary ny haben'ny tsenan'ny bateria lithium ho an'ny fitaovana elektrika any Shina dia hahatratra 7.488 miliara yuan.
Wu Hui, tale jeneralin'ny Departemantan'ny Fikarohana ao amin'ny Ivey Economic Research Institute, dia nilaza fa ny bateria lithium ho an'ny fitaovan'ny herinaratra dia mitaky fahombiazan'ny taha, noho izany ny ambaratonga dia avo kokoa noho ny batterie karazana angovo mahazatra. Nandritra ny fotoana elaela, ny bateria ho an'ny fitaovana herinaratra eto amin'izao tontolo izao dia nohazonin'ny Samsung SDI, Panasonic, Murata, LG ary orinasa bateria Japoney sy Korea Atsimo hafa. Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny orinasa sinoa toa ny angovo lithium Yiwei, Tianpeng, haisida ary orinasa hafa dia nanomboka ho be dia be ny haben'ny tsenan'ny orinasa bateria eto an-toerana amin'ny bateria lithium avo lenta ho an'ny fitaovana herinaratra eto amin'izao tontolo izao.
Wu Hui dia nilaza fa amin'izao fotoana izao, ny batterie fototra ho an'ny fitaovana elektrika dia 1.5Ah sy 2.0ah. Orinasa batterie any ivelany dia efa nanome batterie 2.5ah tamin'ny fitaovana be dia be. Orinasa bateria sinoa toy ny angovo lithium Yiwei dia hamatsy bateria 2.5ah amin'ny taona 2020. Tsara ny manamarika fa ny ATL sy ny orinasa bateria fonosana malefaka hafa dia manandrana mampiasa ny sela fonosana malefaka amin'ny sehatry ny fitaovana elektrika ihany koa.
Ao amin'ny taratasy fotsy momba ny fampandrosoana ny indostrian'ny fitaovana elektrika any Shina (2020), ny Ivey Economic Research Institute dia nanao fanadihadiana feno momba ny toetra fototra sy ny rojom-pifaneraserana amina fitaovana elektrika, ny haben'ny fandefasana eran-tany ary ny maridrefy isan-karazany amin'ny karazana fitaovana elektrika, Ny karazana fitaovam-pitaovana isan-karazany any Shina sy ny haben'ny tsena, ny firafitry ny fifaninanana isam-paritra sy ny orinasa amin'ny indostrian'ny fitaovana elektrika, ary ny toe-javatra fanondranana sy ny toe-javatra fanondranana ny indostrian'ny fitaovana elektrika Ny haben'ny fanondranana sy ny faritra, ny vokatra ary ny toe-java-misy eo amin'ny orinasa. orinasa, sy ny raharaham-barotra ny mpamatsy bateria fitaovana lehibe dia voadinika amin'ny an-tsipiriany, ary ny indostrian'ny fitaovana herinaratra ao anatin'ny dimy taona ho avy dia dinihina sy vinavinaina mialoha.
Fotoana fandefasana: Sep-11-2020
Adiresy: gorodona 5-6, zaridaina Li Jia Industrial, Qiao tou, Dong guang, Guangdong, Sina
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona dia nanamboatra ...
Ny fiakaran'ny vidin'ny kobalt dia nihoatra ny fanantenana ...
Tamin'ny taon-dasa, 11.0 GWH an'ny bat lithium manerantany ...
TRUE Power nanatrika ny foara HK tamin'ny 12 Okt 2019.
Fanadihadiana ny bateria lithium sy ny angovo vaovao ...
Battery bateria azo averina 12v Lithium, 18650 Nimh, Li Battery, Kitapo bateria Lithium azo haverina 12 Volt, Lithium Ion Polymer Battery, 3.7 bateria azo haverina, Vokatra rehetra